1. Kedu ihe na -ebute ọkwa glucose ọbara dị elu?
Ọtụtụ ihe nwere ike bụrụ ihe na -ebute ọkwa glucose ọbara dị elu, mana ihe anyị na -eri na -ekere oke na nke kacha mkpa n'ịwelite shuga ọbara. Mgbe anyị na -eri carbohydrates, ahụ anyị na -agbanwe carbohydrates ndị ahụ ka ọ bụrụ glucose, nke a nwere ike rụọ ọrụ n'ịwelite shuga ọbara. Protein, ruo n'ọ̀tụ̀tụ̀ ụfọdụ, n'ọ̀tụ̀tụ̀ dị elu nwekwara ike ibuli ọ̀tụ̀tụ̀ shuga dị n'ọbara. Abụba anaghị ebuli ọkwa shuga dị n'ọbara. Nchegbu na -eduga n'ịbawanye homonụ cortisol nwekwara ike ibuli ọkwa shuga dị n'ọbara.
2. Kedu ihe dị iche n'etiti ụdị ọrịa shuga 1 na ụdị nke abụọ?
Ọrịa shuga 1dị nke atọ bụ ọrịa autoimmune nke na -ebute ahụ enweghị ike imepụta insulin. Ndị mmadụ na -arịa ọrịa shuga Ụdị nke Mbụ ga -enwerịrị insulin ka ha nwee ike na -enwe ọ̀tụ̀tụ̀ glucose n'ime oke ókè. dabere na insulin a na -emepụta.
3. Kedu ka m ga -esi mara ma enwere m ọrịa shuga?
Enwere ike ịchọpụta ọrịa shuga n'ọtụtụ ụzọ. Ndị a gụnyere glucose na -ebu ọnụ nke> ma ọ bụ = 126 mg/dL ma ọ bụ 7mmol/L, hemoglobin a1c nke 6.5% ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ glucose dị elu na nnwale nnabata glucose (OGTT). Na mgbakwunye, glucose enweghị> 200 na -egosi ọrịa shuga.
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ akara na akara ngosi na -egosi ọrịa shuga ma kwesịrị ime ka ị tụlee nyocha ọbara. Ndị a gụnyere akpịrị ịkpọ nkụ nke ukwuu, mmamịrị ugboro ugboro, ịhụ ụzọ na -ahụghị anya, ịma jijiji ma ọ bụ tingling nke nsọtụ, ibu ibu na ike ọgwụgwụ. Mgbaàmà ndị ọzọ enwere ike ịgụnye adịghị arụ ọrụ erectile n'ime ụmụ nwoke yana oge adịghị anya na ụmụ nwanyị.
4. Ugboro ole ka ị ga -enyocha glucose ọbara m?
Ugboro ole ị ga -enyocha ọbara gị ga -adabere na usoro ọgwụgwọ ị nọ yana ọnọdụ onye ọ bụla. Ntuziaka 2015 NICE na -atụ aro ka ndị nwere ụdị ọrịa shuga 1 nyochaa glucose ọbara ha opekata mpe ugboro 4 n'ụbọchị, gụnyere tupu nri ọ bụla na tupu ihi ụra.
5. Kedu ka ọkwa glucose nkịtị kwesịrị ịdị?
Jụọ nlekọta ahụike gị ka ọ nye gị ụdị oke ọbara shuga dị mma maka gị, ebe ACCUGENCE nwere ike inyere gị aka ịhazi oke ya na njiri ihe ngosi ya. Dọkịta gị ga -esetịpụta nsonaazụ nnwale shuga ọbara dabere na ọtụtụ ihe, gụnyere:
● Ụdị na ike nke ọrịa shuga
● Ogologo oge ole ka ị na -arịa ọrịa shuga
Status Ọnọdụ afọ ime
Ọnụnọ nke ọrịa shuga
● Ahụike niile na ọnụnọ ọnọdụ ahụike ndị ọzọ
Ndị otu American Diabetes Association (ADA) na -atụkarị aro maka ọkwa shuga dị n'ọbara:
N'etiti 80 na 130 milligrams kwa deciliter (mg/dL) ma ọ bụ 4.4 ruo 7.2 millimoles kwa liter (mmol/L) tupu nri
Ihe na -erughị 180 mg/dL (10.0 mmol/L) awa abụọ ka e risịrị nri
Mana ADA na -ekwupụta na ebumnuche ndị a na -adịgasị iche dabere na afọ gị na ahụike onwe gị yana ekwesịrị ka ọ bụrụ nkeonwe.
6. Kedu ihe bụ Ketones?
Ketones bụ kemịkalụ emere n'ime imeju gị, ọ na -abụkarị mmeghachi omume metabolic ka ịnọ na ketosis nri. Nke ahụ pụtara na ị na -eme ketones mgbe ị nweghị glucose zuru oke echekwara (ma ọ bụ shuga) iji ghọọ ike. Mgbe ahụ gị chọpụtara na ịchọrọ ihe ọzọ maka shuga, ọ na -agbanwe abụba ka ọ bụrụ ketones.
Igwe ketone gị nwere ike ịdị ebe ọ bụla site na efu ruo 3 ma ọ bụ karịa., A na -atụkwa ha na milimoles kwa lita (mmol/l). N'okpuru bụ usoro izugbe, mana buru n'uche na nsonaazụ ule nwere ike ịdị iche, dabere na nri gị, ọkwa ọrụ gị, na ogologo oge ị nọrọ na ketosis.
7. Kedu ihe bụ ketoacidosis mamịrị （DKA）?
Ọrịa mamịrị ketoacidosis (ma ọ bụ DKA) bụ ọnọdụ ahụike siri ike nke nwere ike ibute oke ọkwa ketones n'ọbara. Ọ bụrụ na amataghị ya ma gwọọ ya ozugbo, ọ nwere ike ibute coma ma ọ bụ ọbụna ọnwụ.
Ọnọdụ a na -eme mgbe sel nke anụ ahụ enweghị ike iji glucose maka ume, ahụ amalitekwa ịkụda abụba maka ume kama. A na -emepụta Ketones mgbe ahụ mebiri abụba, na oke ketones nwere ike ime ka ọbara bụrụ acidic. Nke a bụ ihe mere nnwale Ketone ji dị mkpa.
8. Ketones na nri
Mgbe ọ na -agbadata ọkwa ziri ezi nke ketosis na ketones n'ime ahụ, nri ketogenic kwesịrị ekwesị bụ isi. Maka ọtụtụ mmadụ, nke ahụ pụtara iri ihe dị ka gram 20-50 nke carbs kwa ụbọchị. Ego ole nke macronutrient ọ bụla (gụnyere carbs) ị ga -eri ga -adị iche, yabụ ịkwesịrị iji onye na -ahụ maka ahụike keto ma ọ bụ naanị kpọtụrụ onye na -elekọta ahụike gị iji chọpụta mkpa nnukwu macro gị.
9. Gini bu uric acid?
Uric acid bụ ngwaahịa nkịtị na -emebi ihe. Ọ na -amalite mgbe kemịkal ndị a na -akpọ purines mebiri. Purines bụ ihe sitere n'okike achọtara n'ime ahụ. A na -ahụkwa ha n'ọtụtụ nri dịka imeju, azụ azụ, na mmanya.
Mmụba dị elu nke uric acid n'ime ọbara ga -emecha gbanwee acid ka ọ bụrụ kristal urate, nke nwere ike gbakọta na nkwonkwo na anụ ahụ dị nro. Nkwụnye ego nke kristal urate dị agịga bụ maka mbufụt na mgbaàmà mgbu gout.
Ngwa Nnwale Nnwale Ọbara Ọbara, Companylọ ọrụ kacha mma na -enyocha shuga, Spirometer nke pneumotachograph, Ọbara ọbara na -ebu ọnụ 100, 5.2 Ọbara shuga, Igwe Nnwale Ọbara Ọbara,